China 30ml 60ml 120ml ogologo kwadoro amba iko ude ite na-acha ọcha metal mkpuchi Manufacture na Factory | Mgbapu
Ihe nhicha karama / ite
Glass mgbapụta Bottle
Glass Spgba Bottle
Glass Cosmetic Bottle / ite
Glass Ude ite
Glass Mkpa mmanụ karama
Iko karama Ihe karama
Iko Glass Polish Bottle
Iberibe Ude mmiri
Glass Food Nchekwa ite / kalama
Karama / karama mmanya
Kalama mmanya karama / ite
Kalama ọgwụ karama / ite
30ml 60ml 120ml ogologo kwadoro amba iko ihu ude ite na-acha ọcha metal mkpuchi
The 30ml 60ml 120ml amber iko ite na mkpuchi dị nnọọ mma maka ntecha na mma, ahịa ọgwụ, aromatherapy na mmanụ, nri na onunu ọrụ. Ezigbo amba a nwere ike inye gị ngwaahịa dị elu n'oge ọ bụla.
30ml 60ml 120ml amba iko ite na mkpuchi ka nke ezigbo amba iko. Emere iko Amber n'ụzọ dị otu a na-enweghị ịgba amba. Uru nke amba iko bụ na ọ na-enye obere nchekwa UV, nke bara ezigbo uru mgbe ị na-echekwa ihe ndị nwere mmetụta ọkụ. Ejikọtara ya na mkpuchi urea ojii, ọ na-enye azịza zuru oke nke ọ bụghị naanị ịchọ mma kamakwa ọrụ.
The 30ml 60ml 120ml amber iko ite with mkpuchi zuru okè maka ezinụlọ ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka ude, balsams, ncha, ntụ ntụ, ntecha, masks, isi na seasonings, wdg. Amber iko enyere iyo ultraviolet ụzarị na-enyere ịgbatị adị ndụ nke ngwaahịa. Nke a na - enyere aka ịbawanye uru, n'ihi na ngwaahịa gị ga - adị ọhụrụ maka ogologo oge.
Easypack Glassware na-enye ndị ahịa niile ohere ịtụ ihe nlele n'efu. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ nkwakọ ngwaahịa anyị n'ọtụtụ, anyị ga-ewetara gị nnukwu ego na ndenye ọpụpụ. Anyị na-akwado ndị ahịa niile ka ha mee nnwale ngwaahịa tupu ịtụ ahịa. Nke a na eme ka enyo anyi enyo enyo nwere ike imezu ihe ị chọrọ tupu ị nweta ego. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị n'efu!
Ike bụ 30ml, 60ml, 120ml
Ejiri ezi iko amba.
Igwe Amber na-enye nchebe UV pere mpe.
Nwere ike ịzụta ite iko doro anya na mkpuchi ebe a.
Anyị nwere ọtụtụ nha na ụdị dị.
MOQ bụ 5,000 PCS
Nnukwu ego na nnukwu iwu.
Labdebanye aha oghere na karama ahụ.
Nke gara aga: 1oz 2oz 4oz cobalt-acha anụnụ anụnụ iko ịchọ mma ude ite na nwa plastic mkpuchi
Osote: 8oz 240ml ogologo kwadoro kandụl kandụl ite na nwa plastic okpu
Glass Glass ite
Anya ude Glass ite
Ihe eji achọ ude mmiri maka ude
Glass Cream ite ihe ntecha
Oghere Glass Maka Ude
Hinds Mmanụ aeyụ na almọnd ude karama
100g 100ml kenkowaputa nwa agba ogologo kwadoro gl ...
1oz 2oz 4oz cobalt-acha anụnụ anụnụ iko ịchọ mma ude ja ...
N'okpuru akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ, iko nkwakọ ...
Ihe kpatara ewu ewu nke soda lime g ...
Ọtụtụ isi ihe na-emetụta ikike ...
Iko karama na ịgba nfuli, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Clear Glass mgbapụta karama, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu,